I-Skillz - Logic Brain Games APK inguqulo yakamuva ye-9 Ansoli - khulula puzzle imidlalo for android
Ufuna ukuhlola amakhono akho ememori noma unikeze ubuchopho bakho ukuzivocavoca? Zama le midlalo yememori ejabulisayo ukuze uthuthukise imemori yakho, isivinini, uthole ukunemba okungcono, ukuhlukanisa phakathi kwemibala nokunye okuningi. Lona umdlalo onomqondo omuhle onikeza ukuhlolwa okuhle ebuchosheni bakho.
Ngalo mdlalo wobuchopho, ungasiza abadlali ukuthi bafunde ukuhlukanisa phakathi kwemibala ehlukene futhi bathuthukise amakhono abo. Abadlali bahlaziya izingqondo zabo ngesikhathi bedlala ukudlala lo mdlalo. Lo mdlalo onengqondo ngumdlalo wokuvivinya amakhono. Futhi, ungahlola ukucabanga kwakho. Kukhona ezinye puzzle game fun kumdlalo of izinhlobo ezahlukene. Wena amaphuzu amaphuzu namazinga kusengaphambili. Umdlalo ojabulisayo nomlutha kakhulu ozokujabulela ngokuphelele.
Ukwengeza ekudlaleni umdlalo onengqondo nokuqeqesha ubuchopho bakho, nawe ujabule kakhulu nomdlalo. Igcwele izinhlobo ezahlukene zokuhlolwa ezithuthukisa amakhono namakhono akho. Nansi indlela -
✓Hlanganisa imemori yakho
✓Qinisekisa ukucabanga kwakho
✓Nciphisa ngokunemba kwakho
✓Vumela ikhono lakho lokuthinta
✓Nciphisa ijubane lakho
✓Funda umbala wokuxhumanisa
Izinga ngalinye lihlola amakhono akho namakhono akho phezulu. Ngemuva kwezinga ngalinye, imiphumela yakho ibalwe phakathi kwe-1 no-5 Stars futhi uzovuzwa ngenani lezinhlamvu ze-Brains. Kuzo zonke izinkanyezi ezitholile uzothola ubuBhondi obulodwa. Ukusebenzisa ubuchopho, ungazama futhi kusuka kumjikelezo wamanje, udlulise nxazonke noma udlulise izinga ngezinkanyezi ezingu-5.
Wonke amazinga aklanyelwe ukukusiza ukuba uthuthukise amakhono akho, inkumbulo ukukhulisa ingqondo yakho nale midlalo yokulutha. Ngakho-ke, usukulungele ukuthatha inselele yobuchopho manje? Landa le app mahhala - "Skillz Logical Brain Game" manje ukuqala.
Umdlalo onengqondo uzisa isici sabadlali abaningi. Nansi indlela eya ngayo -
- Dlala nabangani bakho noma nabadlali abangahleliwe
- Qalisa umdlalo nabancane abadlali ababili. Umkhawulo ophezulu u-4.
- Uma uqedela lo mdlalo kumodi yabadlali abaningi endaweni yokuqala, uthola i- "Win" ne-Brain 5. Uma uqedela lo mdlalo kodwa endaweni yesibili, uhola amaBrains angu-3 kuphela futhi awukho "Win"
- I-Multiplayer yakho usezingeni usekelwe "Wins"
- Dlala kumodi yabadlali abaningi futhi uvule izimpumelelo
Uzoyithanda isici, ngakho-ke qala ukuhlanganyela nabangani bakho.
Inguqulo Yamanje: 5.1.4
Abasebenzisi Bokulinganisa: 379,101
Igama Lephakheji: net.rention.mind.skillz